Ngaphezulu kwama-20% eKhepha laseKhaya eliCofwayo livela kuLuhlu olunye | Martech Zone
Ngaphezulu kweepesenti ezingama-20 zekhasi lethu lasekhaya lokuCofa uvela kwiNqaku elinye
Lwesine, Matshi 10, 2016 Lwesine, Matshi 10, 2016 Douglas Karr
Sityikitye iHotjar senza ezinye ukuvavanywa kwemephu yobushushu kwiphepha lethu lasekhaya. Iphepha lasekhaya elifanelekileyo elinamacandelo amaninzi, izinto kunye nolwazi. Injongo yethu ayikokubhidanisa abantu-kukubonelela ngephepha elilungelelanisiweyo apho iindwendwe zinokufumana nantoni na eziyifunayo.
Sazi njani? Ngaphezulu kwama-20% kuko konke ukubandakanyeka kumaphepha ethu asekhaya ibha yokukhangela. Kwaye ekujongeni intsalela yephepha lethu, iindwendwe kunqabile ukuba ziskrola kwaye zinxibelelane ngakumbi ezantsi kwephepha lethu. Ukwahluka kukuba iindwendwe ezininzi ziya kwiinyawo zethu.
Siphumeze Swiftype ngenkonzo yethu yokukhangela ngaphakathi. Inika isixhobo esomeleleyo se-autosuggest, ukunika ingxelo enkulu, kwaye sinezinto ezininzi esinokuthi sizisebenzise kwindawo esinayo.
Nokuba indawo yakho ibekwe kakuhle kanjani, indlela olungelelaniswe ngayo, iindwendwe zifuna ulawulo kumava azo kwaye zifuna indlela enkulu yokukhangela yangaphakathi yokufumana into endiyifunayo. Njengoko sisebenza neenkampani ezipapasha rhoqo, ukuba neendlela zokukhangela ezinamandla kunye ezinomdla kufuneka. Ukuba awusebenzisi i khangela njengenkonzo isixhobo, qiniseka ukuphumeza ukufuna umkhondo wangaphakathi kwii-analytics zakho. Ixesha elingaphezulu, uya kubamba nolunye ulwazi olumnandi kwizihloko ezifunwa ngabakhenkethi bakho ongakhange uvelise mxholo wazo.
tags: cofa uhlalutyoimephu yobushushuekhayaubeko lwephepha lasekhayaishushuuphando lwangaphakathikhangela njengenkonzoUphando lwezoPhandoiswiftype
Yeyiphi indleko yokufumana ngokuchaseneyo nokugcina umThengi?
Iinqwelo othengela kuzo iMarike ephumeleleyo ziLutha ngokuqaqambileyo
Mar 19, 2016 ngo 4:50 PM
Yinyani leyo. Kuyilo kungcono ukuyibonisa njengeyona nto inomtsalane kubaxhasi bamakhonkco njengoko kunokwenzeka. Akusoloko kubaxhasi becofa indawo ethi "eyona-nkampani ibalaseleyo" kwiwebhusayithi yethu.